March 13, 2017 – Maanta oo Isniin ah ayay ku beegantahay maalintii baarlamaanka dalka Mareykanka uu Madaxweyne Donald Trump u qabtay inuu ugu dambeyn ku keeno cadeymo muujinaya eedeymo culus uu dhawaan usoo jeediyay Madaxweynihii hore ee dalkaasi Barack Obama.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ee hadda taladahaya ee Donad Trump ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore Barack Obama inuu si sharci daro ah u dhagestay telfoonkiisa gaarka ah xiligii uu socday ololihii doorashada dalkaasi.
Donald Trump ayaan ilaa iyo hadda wax cadeymo ah oo ku aadan eedeynta uu u jeediyay in telfoonkiisa dhageestay soo bandhigin, waxana ayna arintan xiisad siyaasadeed ka dhex abuurtay Baarlamaanka dalka Mareykanka.
Xildhibaanada labada aqal ee dalka Mareykanka ayaa ka dalbaday Madaxweyne Donald Trump in uu keeno cadeymo muujinaya dambiga uu ku eedeeyay Barack Obama, waxaana laga sugayaa Donald Trump in uu jawaab siiyo Baarlamaanka labada Aqal.
Hay’ada Danbi baarista Maraykanka FBI -da ayaa horey u sheegtay in waxbo kama jiraan ay tahay eeda Trumo u jeediyay Obama , FBI ayaana ka codsatay Wasaarada Cadaalada inay si cad u qirto inaysan jirin hadalka Trump kasoo yeeray.
Madaxweyne Donald Trump ayaa iminka ku jira gabasho uu uga dhuumanayo warbaahinta dalka Maraykanka, waxaana la sheegayaa inay hadda ku furmaan eedeymo badan oo uga imaanaya meelo kala duwan sida, Xiriirka u dhaxeeya isaga iyo Ruushka, ObamaCare, Mamnuucida shacabka lixdal oo Muslin ah, iyo eedeyntii cuslayd ee uu u jeediyay Madaxweyne Obama.